प्रदेश स्तरीय क्रिकेट चौथो दिन : सप्तरी र पर्साको सहज जित – CricPati
क्रीकपाटी २८ मंसिर, जनकपुर ।
धनुषाको जनकपुरमा संचालित प्रदेश नं. २ स्तरीय पुरुष तर्फको क्रिकेट प्रतियोगिता अन्र्तगत सप्तरीले महोतरीलाई सजिलै ७ बिकेटले पराजित गरेको छ भने पर्साले सर्लाहिलाई ७ बिकेटले पराजित गर्दै बिजय शुरुवात गरेको छ ।
जनकपुरको बाह्रबिघा मैदानमा सप्तरीले टस जिती ब्याटिंगको लागि महोतरीलाई निम्तो दिए पछि ब्याटिंग गर्न आएको महोतरीले रवी सिंहको सतकिय पारीको मद्धतले निर्धारित ४५ ओभरको खेलमा ७ बिकेट गुमाई २ सय २२ रनको योगफल तयार पारेका थिए । रवि सिंहले आर्कषक ब्याटिंग गर्दै ८६ बलमा ५ छक्का र १० चौक्काको मद्धतले नटआउट रहि १ सय ८ रनको योगदान दिएका थिए । रवि बाहेक महोतरीका लागि राजकुमार साहानी २६, आदित्य झा २१ र शौरभ नागबन्सीले २० रनको योगदान दिएका थिए । बलिंग तर्फ सप्तरीका रोहित सिंह, अनुज यादव, महवुव आलम, रोबिन सिंह, बिकास दास र राहुल मण्डलले सामान १ बिकेट लिएका थिए ।
२ सय २३ रनको बिशाल लक्ष्य लिई मैदानमा ओर्लेको सप्तरीले महवुव आलम र आशिष झाको उत्कृष्ट ब्याटिंगका कारण उक्त लक्ष्य सजिलै २६ ओभर ३ बलमै ३ बिकेटको नोक्सानीमा प्राप्त गरेका थिए । जसमा महवुव आलमले सतकिय पारी खेल्दै बिस्फोटक ४७ बलमा ८ चौक्का र १० छक्काको मद्धतले नटआउट रहि १ सय १ रनको योगदान दिएका थिए भने आशिष झाले ५० बलमा ५ चौक्का र ४ छक्काको मद्धतले ६३ रनको योगदान दिएका थिए । यी दुई बाहेक राहुल मण्डडले नटआउट रहि २२ रनको योगदान दिएका थिए । बलिंग तर्फ महोतरीका मो. युसुफ, राहुल प्रताप सिंह र पुरज ढुंगेलले सामान १ बिकेट लिएका थिए ।
प्रतियोगिता अन्र्तगत नै आईतवारबाट बाराको सिद्धेश्वरमा संचालित अर्को खेलमा पर्साले सर्लाहिलाई ७ बिकेटले पराजित गर्दै बिजयी शुरुवात गरेको छ ।
सर्लाहिले टसजिती पहिलो ब्याटिंग गर्ने निर्णय गरेपछि ब्याटिंग गर्न ओर्लेको सर्लाहिले निर्धारित ५० ओभरको खेलमा ३२ ओभर ५ बलमा आफना सम्पुर्ण बिकेट गुमाई ९२ रनमै समेटिएको थियो । सर्लाहिका लागि सुधिर चौधरीले ५९ बलमा १ चौक्का र १ छक्काको मद्धतले २७ तथा सोहन यादव १६ र पप्पु दासले नटआउट रहि १६ रनको योगदान दिएका थिए । बलिंग तर्फ पर्साका सैफुल्लाह अंसारीले उत्कृष्ट बलिंग गर्दै ६ ओभर ५ बलमा १ मेडन सहित ११ रन दिई ३ बिकेट लिएका थिए भने समसाद अंसारीले ३ तथा सम्साद मंसुरीले २ बिकेट लिएका थिए ।
९३ रनको झिनो लक्ष्य लिई मैदानमा ओर्लेको पर्साले उक्त लक्ष्य १६ ओभर ३ बलमा ३ बिकेटको नोक्सानीमा सजिलै भेटाएका थिए । पर्साका लागि सन्तोष कार्किले नटआउट रहि ४६ बलमा ५ चौक्का र १ छक्काको मद्धतले ३६ रन तथा सुरज प्रसाद कुर्मिले २० र सैफालि हवारीले नटआउट रहि २० रनको योगदान दिएका थिए । बलिंग तर्फ सर्लाहिका मेराज मिकरानीले २ तथा गुलसन झाले १ बिकेट लिएका थिए ।
उत्कृष्ट बलिंग गरे वापत पर्साका सैफुल्लाह अंसारी म्यान अफ द म्याच भएक थिए ।
प्रतियोगिता अन्र्तगत सोमवार जनकपुरमा धनुषा र सिरहा बिच तथा बाराको सिद्धेश्वरमा सर्लाहि र बारा बिच हुने जानकारी प्रदेश क्रिकेट संघका सचिव आयुश श्रेष्ठले दिनु भएको छ ।